लाहुरमा हराएको पहिचान ::Nepali TV
You are here : Home News लाहुरमा हराएको पहिचान
करिव दुई सय बर्षअघि देखि लाहुर जान थालेका नेपाली जनजाति युवाहरु अझै पनि छाति नाप्न लालयित छन् । मुलुकले संघीयता र समावेशी संरचना अंगालिसकेको बेलामा पनि जनजाति युवाहरु लाहुरमै आफ्नो पहिचान खोजिरहेका छन् “लाहुरे” नेपाली समाजमा प्रचलित शव्द हो। लाहुरे शब्द नेपाली समाज भित्र पनि विशेष गरेर जनजाति समुदायमा लोकप्रिय छ। लाहुरे शव्दको उत्पति कुनै समय पाकिस्तानको “लाहोर” भन्ने शहरमा काम गर्न जाने नेपालीहरुलाई लाहुरे भन्ने प्रचलनबाट सुरु भएको मानिन्छ। नेपालीहरुको विगत दुई सय वर्षदेखिको लाहुर जाने परम्परा अहिले पनि कायमै छ। मात्र यसको स्वरुपमा परिवर्तन आएको छ।
अर्कोतर्फ बेलायतले लाहुरेलाई धन दिएन तलब दियो। धन दिएको भए खोईत यो देशमा कति जना लाहुरेहरु उद्योगपति बने? बेलायतले लाहुरेहरुको दिमाग बनाइ दिएन मसल बनाइदिए। लाहुरेहरुलाई पहिचान दिएन तेस्रो दर्जाको अस्थाई परिचय पत्र दिए। त्यसैले अब लाहुरेहरुले वास्तविक पहिचान आफ्नै देशमा खोज्ने समय आएको छ। लाहुरको बन्दुक र खुकुरीमा पहिचान पुर्खाहरुले बनाइसकेका छन्। त्यसैले आफ्नो राज्यको अङ्गहरु भित्र पहिचान खोज्ने उपयुक्त समय आएको छ। यो उपयुक्त समयको सदुपयोग गर्नु बाहेक अन्य विकल्पहरु हामीसँग छैन। त्यसैले अब लाहुरको तेस्रो दर्जाको नागरिक बन्नुभन्दा स्वदेशको पहिलो दर्जाको नागरिक बन्नुमा गर्व गर्ने कि? यो लेख कान्तिपुर बाट साभार गरियको हो